News List - पत्रपत्रिका
नेपालको शौचालय विश्वमै 'सुन्दर'
८ वैशाख, काठमाडौं । शौचालय भन्नेबित्तिकै तपाईंले नाक खुम्च्याउनु हुँदो हो तर यात्रा साहित्य प्रकाशन गर्ने लोनली प्लानेटले भने संसारका हेर्न लायक शौचालयको सूची प्रकाशन गरेको छ। त्यसैपनि यात्रा गर्नेहरुका लागि शौचालयको महत्व कति बढी छ भनिरहनु पर्दैन। कतिपय ...
एमाले सांसद राज्यलक्ष्मी गोल्छामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा छानबिन
८ वैशाख, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले एमाले सांसद राज्यलक्ष्मी गोल्छामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानविन थालेको छ। एमालेका विभिन्न नेतालाई ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिएर सभासद बनेको अभिव्यक्ति दिएकी सांसद गोल्छालाई सोही बयानका आधारमा ...
८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्ष २०७१ /७२मा खरिद गरेभन्दा कबिर तीन करोड लिटर तेल कम बिक्री गरेको छ । तापक्रम र प्रशासनिक चुहावटका कारण इन्धन नोक्सानी भएकाले कम परिणाम बिक्री भएको निगमको दाबी रहेको छ । ०७१/७२ को अडिट रिपोर्ट अनुसार निगमले एक ...
८ वैशाख, काठमाडौ । प्रचण्ड नेतृत्वको एमाओवादी र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीबीचको एकता चर्चाले साकार रुप नलिंदै वैद्यनिकट माओवादी अन्ततः विभाजनको संघारमा पुगेको छ । यसको स्पष्ट संकेत प्रचण्डले गुरु मान्दै आएका स्यंम वैद्यले उनीसँगको ...
पारसद्धारा पैसा माग्दै फेरि पिटपाट
८ वैशाख, काठमाडौ । नयाँ वर्षको अवसरकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नागार्जुन बंगलाबाट आफू निकटलाई शुभकामना सन्देश पठाए, जसमा पहिलोचोटी सारा परिवारको रंगिन तस्वीर टाँसिएको छ । पारस छेउमा बसेका छन् । ख्याउटे मुद्रामा उनै पारसले बाबुसँग पैसाको निम्ति झगडा गरेको र ...
प्रधानमन्त्री ओली मधेसविरोधी : भट्टराई
८ वैशाख, महोत्तरी । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मधेसविरोधी भएको आरोप लगाएका छन् । सर्लाही सदरमुकाम मलंगवामा मंगलबार नयाँ शक्ति नेपालले आयोजना गरेको अन्तक्रियामा भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मधेसमा आउन ...
घर बनेनन्, चर्च तयार
८ वैशाख, काठमाडौ । भूकम्पले घर भत्किएको एक वर्ष बित्न लाग्दा सर्वसाधरणले अझै स्थायी अवास बनाउन नसके पनि त्यस क्रममा भत्किएका अधिकांश चर्चहरु बनिसकेका छन् । त्रिपाल र जस्ताका टहरामा बस्ने क्रिस्चियन धर्मावलम्बी भूकम्पपीडित नवर्मित सुविधा सम्पन्न् भवनमा ...
‘सेतो हात्ती’ बन्दै चिनियाँ जहाज, आम्दानीभन्दा तीनगुणा बढी खर्च
८ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमसँग रहेका दुई थान चिनियाँ जहाजले जति आम्दानी गर्छन्, तिनलाई उडाउन आम्दानीको तीनगुणा बढी खर्च हुने गरेको खुलेको छ। निगमसँग रहेको ५६ सिट क्षमतायुक्त ‘मोर्डन आर्क’ एम्ए–६० ले एक वर्ष र १८ सिटे वाई ...
नेपाली भनेर अमेरिका छिर्नेको लहर
८ वैशाख , काठमाडौं । दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा नेपाली भनेर समातिएकाहरुमध्ये अधिकांश अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकका नागरिक भएको पाइएको छ। नेपाली भनेपछि तत्काल फर्कनु नपर्ने हुनाले दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकका नागरिकले पनि आफूलाई नेपाली भन्ने गरेका हुन्। दक्षिण ...
वर्षमा १५ लाख पटक भूकम्प !
७ वैशाख, काठमाडौं । अघिल्लो र यस साता जापान, इक्वेडर, अफगानिस्तानलगायतका मुलुकमा आएका ठूला भूकम्पका कारण नेपाली पनि त्रसित बने- कतै नेपालमा फेरि गत वर्ष वैशाख १२ को जस्तै भूकम्प आउँछ कि भनेर । तर भूकम्पको भविष्यवाणी गर्न नसकिए पनि यसको विषयगत प्रकृति हेरेर ...
भारत र इयुको वक्तव्यबाजी गलत : मणिशंकर ऐयर, वरिष्ठ नेता (भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस)
७ वैशाख, काठमाडौं । दुवै देशबीच उच्चस्तरमा कुराकानी पनि भइरहेकै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको राजकीय भ्रमण गरेर फर्किनुभयो । तर, एक महिना नबित्दै भारत र युरोपियन युनियनले नेपालमा राजनीीतक समस्या समाधान गर्न बाँकी छ भन्ने आशयको संयुक्त वक्तव्य दिए । ...
संघीय गठबन्धनले राष्ट्रिय जनआन्दोलन गर्ने
७ वैशाख, काठमाडौं । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले अन्य दललाई समेटेर गठन गरिएको संघीय गठबन्धनको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनको तयारी गरेको छ । ५ वैशाखमा बसेको गठबन्धन बैठकले राष्ट्रिय आन्दोलनबारे साझा अवधारणापत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ । सात ...
खुमबहादुरलाई उपसभापति बनाए प्रतिस्पर्धी हुने देउवालाई डर
७ वैशाख, काठमाडौं । खुमबहादुरलाई उपसभापति मनोनित गर्ने देउवाको प्रतिवद्धता थियो । त्यसैले उनी उपसभापतिका स्वभाविक दावेदार हुन् । तर, देउवा अर्को महाधिवेशनमा पनि सभापति बन्न इच्छुक छन् । खुमबहादुरलाई उपसभापति बनाए शक्तिशाली हुने र उनले नै पछि सभापतिमा चुनौती ...
नेपाली भूमिमा भारतीय क्रसरको रजाइँ
७ वैशाख, काठमाडौं । सुरक्षा निकाय र प्रशासनको पहुँच थोरै मात्रै रहेको झापा-इलाम सीमाक्षेत्रस्थित मेची बगरबाट भारतीयले निर्माण समाग्री तस्करी गरिरहेका छन् । भारतीय क्रसर सञ्चालकले रातको समयमा नेपाली भूमिबाट ढुंगा ओसारिरहेका छन् ।सोमबार बिहान साढे ५ बजे ...
सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय रुपैयाँ अभाव
७ वैशाख, काठमाडौं । मध्य तराईका बारा, पर्सा र रौतहटमा भारतीय रुपैयाँको अभाव भएको छ । भारतीय रुपैयाँ अभावले यहाँका उद्योग व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवा प्रभावित भएका छन् । भारततर्फ पूँजी पलायन भइरहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रुपैयाँको सटही ...
७ वैशाख, काठमाडौं । पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका बजेट जुटाउन गरिने ऋण तथा अनुदान सम्झौतका विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल सरकारबीच विवाद भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच गर्नुपर्ने विमानस्थलको ऋण तथा अनुदान ...
६ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण भारतका लागि ऐतिहासिक झापड सावित भइसकेको छ । यो झापडमाथि अर्को झापड नखान भारतले भित्री खेल खेलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्व नेतृत्वको वर्तमान सरकारले बजेट ल्यो भने भारतका लागि अर्को झपड सावित हुन ...
६ वैशाख, काठमाडौं । चिनियाँ जहाज आएपछि बजारमा हिस्सा बढ्ने र प्रशस्त नाफा कमाउने सपना देखेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई अहिले आएर ती जहाज घाँडो भएका छन् । चार थान किन्दा दुइवटा सित्तैमा पाइने चिनियाँ स्किम अनुसार पहिलो खेपमा ल्याइएका दुई ...
देउवाले थाले मोर्चासँग छलफल
६ वैशाख, काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी दलसँग संवाद थालेका छन् । मधेसका मुद्दा अब संवाद र सहमतिबाट टुंग्याउन ठूलो दलको रूपमा कांग्रेसले पहल गर्ने देउवाले बताएका छन् । भारत जानु अघिल्लो दिन देउवाले आइतबार आफ्नै निवास ...
नाकाबन्दीको जरिबाना बुझाउन भारतको ताकेता !
६ वैशाख, काठमाडौं । भारतीय पक्षले विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीसँग तेस्रो देशबाट सामान आयत गर्दा भएको विलम्बवापत् लाग्ने जरिबान बुझाउन ताकेटा गरेको छ । कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्सको प्रावधानभन्दा धेरै समयसम्म सीमामा रहेका कन्टेनरलार्य लाग्ने जरिवाना ...
Results 666 - You are at page 1